ကုန်ပစ္စည်းန့်သတ်ချက်များနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Ref. ပစ္စည်းရွေးစရာများ C2S အနုပညာစက္ကူ C1S Art Paper မီးခိုးရောင်ကတ်ထူပြားအထူးစက္ကူသိုင်းရိုက် CCNB 128 gsm 160 gsm 600-1000gsm 120gsm B3 / B9 W9 250gsm 157gsm 210gsm 1200gsm 157gsm A3 / A9 (AE) 300GSM 190gsm 250gsm 1400gsm 182gsm C3 / C9 350gsm 210gsm 300gsm 1800gsm 250gsm F-Flute ...
ကုန်ပစ္စည်း Parameters အရွယ်အစားသုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များအရ 1C-4Colours / offset ပုံနှိပ်ခြင်း Art Paper 128gsm - 400gsm Kraft Paper 80gsm - 250gsm ဖန်စီစက္ကူ 110 gsm - 230GSM Cardboard 800gsm, 1000gsm, 1200gsm, 1500gsm 1800gsm EVA ထည့်ပါ, အမြှုပ်နှင့်ပိုး. ကတ္တီပါ, ကတ်ထူပြား, ပလတ်စတစ်အချောသတ်ခြင်း, Glossy Lamination, Matt Lamination, ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်, Hot Stamping ထုပ်ပိုးခြင်းထုတ်ကုန်များသည်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့်ပုံးများ (သို့မဟုတ်) ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီထုပ်ပိုးထားသည်3အလွတ်နမူနာအတွက်ရက်,…
ကုန်ပစ္စည်း Parameters ပစ္စည်း Fashion Style စိတ်ကြိုက်အနက်ရောင်၊ တောက်ပသောသစ်သားထုပ်ပိုးမှုလက်ဆောင်ထုပ်ပိုးခြင်းဖဲကြိုးနှင့်အတူစက္ကူအိတ်ဖြင့်လွယ်ကူစွာထုပ်ပိုးထားသည်. ကုဒ် 48191000000 ပစ္စည်း Kraft စက္ကူ,စက္ကူဘုတ်, အနုပညာစက္ကူ,မြှောင်းပုံဘုတ်အဖွဲ့,စက္ကူ coated, အရွယ်အစား(L ကို * W * H ကို) ထုံးစံအရောင် CMYK litho ပုံနှိပ်ခြင်းလက်ခံပါ, Pantone အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း, သင်၏တောင်းဆိုမှုအဖြစ် Flexo ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်းအပြီးသတ်ထုတ်ယူခြင်းအရာဝတ္ထု / Matt Varnish, Glossy / Matt …
ကုန်ပစ္စည်း Parameters အမည်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူလက်ကားကုန်ကြမ်းစိတ်ကြိုက်လိုဂိုပုံနှိပ်ပဝါထုပ်ပိုးစျေးသက်သာသောလက်ဆောင်စက္ကူအိတ်အရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်မျက်နှာပြင်အဖုံး Matt / Glossy lamination,ခရမ်းလွန်အစက်အပြောက်, ချေးငွေ,တိပ်ခွေလေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်,သတ္တုပါးပုံနှိပ်ခြင်းစသည်တို့. ပစ္စည်း Option ကိုဆင်စွယ်စက္ကူ,အနုပညာစက္ကူ,မြှောင်းပုံစက္ကူ,Kraft စက္ကူ,စက္ကူ coated,Iridescent စက္ကူ. အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း 1.CMYK အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း 2.Pantone အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း OEM / ODM ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်နမူနာအချိန် - …
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်အသေးစိတ်တိုင်းတာခြင်းသင်၏တောင်းဆိုမှုအတိုင်းအတာစိတ်ကြိုက်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Surface Finishing Gloss / Matte Lamination, ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်, Aqueous ကုတ်အင်္ကျီ, ချစ်ခြင်း, ရွှေ / ငွေတံဆိပ်တုံးခုတ်ယူခြင်း / ဖောင်းကြွ, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ , အားကစားခရမ်းလွန်စသည်. ပုံနှိပ်ရွေးချယ်မှု CMYK ပုံနှိပ်ခြင်း, အစိုင်အခဲအရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု EVA, ဖဲကြိုး, Pet Tray, PVC блистер, ရေမြှုပ်, ကတ္တီပါ, သံလိုက် , ဝါဂွမ်း Artowrk ပုံစံကို CorelDraw , Adobe Illustrator, ဒီဇိုင်း၌, PDF, အတွင်း၌အချိန်နမူနာဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း 3-5 အလုပ်လုပ်ရက်အတွင်းထုတ်လုပ်မှုအချိန်အတွင်း 10-15 အလုပ်ရက်အမိန့်အရေအတွက်အရသင်္ဘောဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းရေကြောင်းဖြင့်သင်္ဘောဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း, လေကြောင်းဖြင့်, Express က:Fedex,DHL,ယူပီအက်စ်,TNT ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ T / T, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ, PayPal သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်ထုပ်ပိုးမှုစံတင်ပို့မှုပုံး, ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရအခြားအားသာချက်များကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေရာတည်းတွင်သာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါသည်, ဒီဇိုင်း,ထုပ်ပိုး& ထိပ်တန်းအရည်အသွေးပုံနှိပ်, အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှု OEM,ODM ၀ န်ဆောင်မှုကိုကြိုဆိုပါသည်။ ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်များအမှာစာလုပ်ငန်းစဉ်ပန်းချီရေးဆွဲခြင်းအနုပညာဒီဇိုင်း→ရုပ်ရှင်ထုတ်ခြင်း→အမှာစာပစ္စည်းများ→ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အလမ်မစ်→သုတ်ခြင်း→ကော်(စက်သို့မဟုတ်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်, အခြေအနေအရပဲ) → QC စစ်ဆေးခြင်း→ထုပ်ပိုးခြင်း→…
ကုန်ပစ္စည်း Parameters ကုန်ပစ္စည်းအမည်လက်ကားဖက်ရှင်ဖက်ရှင်စတိုးအ ၀ တ်အထည်များ ၀ ယ်ယူရန်လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးခြင်းစက္ကူအိတ်အရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်အရောင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ် CMYK + Pantone အရောင်ပစ္စည်းစက္ကူစိတ်ကြိုက်အခြားစက္ကူအနုပညာစက္ကူ, စက္ကူ coated, မြှောင်းပုံစက္ကူ, ကွမ်းခြံကုန်း, အထူးစက္ကူ Surface က Finishing Varnishing, တောက်ပ lamination, Matt lamination, hot stamping,…
ကုန်ပစ္စည်း Parameters ပစ္စည်းအမည် Kraft စက္ကူအိတ် Usage Shopping ,အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆုလက်ဆောင်,လက်လီအရောင်းဆိုင်များ, ထုပ်ပိုး, စသည်တို့. ပစ္စည်း Coated စက္ကူ, kraft စက္ကူ, အနုပညာစက္ကူ, ကွမ်းခြံကုန်း, အထူးစက္ကူ, စသည်တို့. Eco-friendly အင်္ဂါရပ်,ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်,အကြမ်းခံပြီးတိကျမှန်ကန်သောကောင်းသောပုံနှိပ်ခြင်း. အရွယ်အစားမဆိုအရွယ်အစား. အရောင်အပြည့်အဝ CMYK သို့မဟုတ် Pantone အရောင်များ. ဖဲကြိုးကိုင်တွယ်, ဝါဂွမ်း, စစ, လိမ်, ချစ်တယ်, သေဆုံး, နိုင်လွန်ကြိုး, အပြား ...
ကုန်ပစ္စည်း Parameters ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် 1.Feature: တိုက်ခန်း,ခေါက်သည်,ဇိမ်ခံ 2.Material: 157ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ 2mm မီးခိုးရောင် board.or နှင့်အတူဂအနုပညာစက္ကူ. 3.အရွယ်အစား: စိတ်ကြိုက် Welcome 4.Color: CMYK အရောင်အပြည့်အစုံ,ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များအဖြစ် Pantone အရောင် 5.Logo&ဒီဇိုင်း: စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏မှိုများ ၆,ပုံနှိပ်ခြင်း,ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ,စသည်တို့ကို 7.Packing: 1polybag အတွက် PCs,10-35pcs in5အလွှာစံမြှောင်းပုံပို့ကုန်ပုံး 8.Weight: အရွယ်အစားအပေါ်အခြေခံသည် & ပစ္စည်း,အထူ…
ကုန်ပစ္စည်း Parameters ကုန်ပစ္စည်းအမည်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးစိတ်ကြိုက်လိုဂိုစက္ကူကိုင်တွယ်သည့်ပစ္စည်းများအနုပညာစက္ကူနှင့်အတူအညိုရောင် Kraft Paper Bags, Kraft စက္ကူ, ဆင်စွယ်ဘုတ်အဖွဲ့, duplex ဘုတ်အဖွဲ့, အထူးစက္ကူ, အရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်ကိုင်တွယ်ဖဲကြိုး, စစကြိုး, ဝါဂွမ်း, နိုင်လွန်, လိမ်, ပြားချပ်ချပ်စက္ကူ, သေ - ဖြတ်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်လက်ကိုင်,စသည်တို့ကို Surface ပြီးအရောင်တင်ဆီ, တောက်ပ / Matt lamination, ရွှေ / ငွေသတ္တုပါးပုံနှိပ်,…
ကုန်ပစ္စည်း Parameters ပစ္စည်း Kraft စက္ကူထုပ်အိတ်အရွယ်အစား 30(L)*4.5(ဇ)*30(ဇ)စင်တီမီတာ ( သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ) ပုံနှိပ်ခြင်းပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းမပြုနိုင်ပါအထူ kraft paper အသုံးပြုခြင်းအွန်လိုင်းဆိုင် MOQ 1000pcs ကိုအသုံးပြုခြင်းအထူး K = K တင်ပို့ခြင်း Carton box များကိုအသုံးပြုခြင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုအချိန် ၂၀ ပေခန့် ၂၀ ရက်ခန့်ခန့် (oreder qty နှုန်းအဖြစ်) ငွေပေးချေမှုငွေပေးချေမှု:50% အပ်ငွေ…
ကုန်ပစ္စည်း Parameters ကုန်ပစ္စည်းတရုတ်စာပုံနှိပ်စက်ရုံသည်ဈေးနှုန်းနိမ့်သောထုံးစံအတိုင်းအလှကုန်စက္ကူသေတ္တာများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ပါသောအော့ဖ်စက်စက္ကူ, တောက်ပ / Matt အနုပညာစက္ကူ, သစ်သားအခမဲ့စက္ကူ, CIS ကဒ်, အဖြူရောင်ကဒ်, အနုပညာစက္ကူ, ဆင်စွယ်ဘုတ်အဖွဲ့, စက္ကူ coated,အထူးစက္ကူစသည်တို့ကိုပုံနှိပ်ခြင်း, PMS , အနက်ရောင် &အဖြူရောင်အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း. ပြီးပြည့်စုံသောခညျြနှောငျခညျြနှောငျ , အပ်ချုပ် &ကော်, ကုန်းနှီးချုပ်, အမှုနှင့်စပ်ဆိုင်သော. W-O binding , Glossy သို့မဟုတ် Matte အလွှာပြီးအောင်ချည်, သုတ်ဆေး, ရွှေသတ္တုပါး / ငွေသတ္တုပါးပုံနှိပ်ခြင်း, ဖောင်းကြွ, ခရမ်းလွန် ,ဖြတ်တောက်ခြင်းသေ ,etc အနုပညာလက်ရာများဖောက်သည်များကထောက်ပံ့သည်. PDF / AI,Photoshop,indesign ဖိုင်များ, Resolution အနည်းဆုံး 300dpi. MOQ 1000pcs အသုံးပြုခြင်းအွန်လိုင်းဆိုင်အသုံးပြုခြင်း， အထုပ်အပိုးများပွဲတော်လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးလက်ကားကုန်ပစ္စည်းများထုပ်ပိုးအသေးစိတ်ထုပ်ပိုးပုံး,သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အနေဖြင့်အခြားထုပ်ပိုးမှုများဖြည့်စွက်ခြင်းအသေးစိတ်အချက် ၃ …
ကုန်ပစ္စည်း Parameters ပစ္စည်း: စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးမှုလက်ဆောင်စက္ကူအဖုံးအဖုံးပစ္စည်းများနှင့်အတူထုပ်ပိုးသေတ္တာ: က) ဆင်စွယ်ဘုတ်(အဖြူရောင်ကတ်ထူပြား) ခ) အနုပညာစက္ကူ(စက္ကူ coated)/Matte အနုပညာစက္ကူက c) နောက်ကျောအဖြူ / မီးခိုးရောင်နှင့်အတူ Duplex ဘုတ်အဖွဲ့) မီးခိုးရောင်ဘုတ်အဖွဲ့င) Kraft စက္ကူ(စာရွက်စာတန်း) f) ပြန်လည်အသုံးပြုစက္ကူ g) သင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုအဖြစ်မဆိုပစ္စည်း. Surface ပုံနှိပ်ခြင်း: Hot stamping, ဖြတ်တောက်ခြင်း, ဖောင်းကြွ, ပိုးမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း, Gloss lamination, Matt lamination, သုတ်ဆေး, သတ္တု Lamination ပုံနှိပ်အားသာချက်: 1.စိတ်ကြိုက်မှင်နှင့်အင်္ကျီ, ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုမရှိလျှင် ၂။ တစ်ပုံစံတည်းကြည့်နိုင်ရန်ဖန်တီးရန်စာမျက်နှာ၏တောက်ပသောနေရာများနှင့်ရောင်ခြယ်ထားသောနေရာများ. 3.သင်၏ထုတ်ကုန်နှင့်ကိုက်ညီသောအပေါ်ယံလွှာ. 4.သင်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်းအကြောင်းအရာကိုပရိသတ်များအားစကားပြောစေမည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ ၅ ။ Heidelberg ပုံနှိပ်စက်သည်သင်၏ပုံနှိပ်အရည်အသွေး၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်။ ဖြတ်စက်သည်တိကျသောအရွယ်အစားကိုပြုလုပ်သည်။. နမူနာများ: အရည်အသွေးတူစွာစစ်ဆေးရန်အတွက်အခမဲ့အလားတူနမူနာကိုကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာတွင်ရနိုင်သည်။ နမူနာကိုစာပို့သူမှပို့မည်: 10-12 သင်၏အမှာစာအတည်ပြုပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာ: Guangzhou သို့မဟုတ် Shenzhen Shipping Way: Express, လေနှင့်ပင်လယ်ငွေပေးချေမှု: T / T, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ, Paypal, ငွေဂရမ်နှင့် Alipay 50% အမိန့်ကိုအတည်ပြုရန်သိုက်, နှင့် 50% တင်ပို့ထုပ်ပိုးမီလက်ကျန်ငွေ: ပလပ်စတစ်အိတ်များသို့မဟုတ်သေတ္တာများတင်ပို့ခြင်း
123နောက်>...6 စာမျက်နှာ 1 ၏ 6